Cheesecakes na cranberries
Icheta obere oge nwatakịrị, ịṅụ tii na bun na-esi ísì ụtọ na ime ka ụmụaka nwee obi ụtọ ga-adị mfe, ebe ha mụtara otú e si eme cheesecakes na-eri nri na cranberries. Site n'okporo ụzọ, ị ga-enwe ihe na-adọrọ adọrọ iji nweta ndị ọbịa na mgbede nke tii na ndị òtù ezinụlọ gị. Njikere nke nkwadebe na ịba uru nke efere maka ụfọdụ ga-amasị onye ọ bụla ekaufọk. Ọzọkwa, iji usoro nkwadebe a chọrọ, mgbe ị na-esi nri raspberries cheesecake, strawberries, cheese chiri na nri ọ bụla ọzọ dị ụtọ.
Ntụziaka maka croissants na cranberries
bọta - 100 g;
ntụ ọka - 1,5 iko;
mmanụ aṅụ - 1 tbsp. l.;
ntụ ntụ - 1 sachet;
ude uto - 200 g.
Na nnukwu efere, mix mix, bọta butter na shuga 200 grams, gbakwunye akwa ọkụkọ na akpa nke ntụ ntụ. Ọzọ, wụsa na ntụ ọka ahụ, jikọta ihe niile na-eme ka edozi ya, ugbu a, ị ga-ahapụ ya maka oge. Nakwa, kama ịme ntụ ọka, ọ ga-ekwe omume iji soda a mịrị amị na ihe ọṅụṅụ lemon.
Mgbe ahụ, tinye mmanu maka mpempe achịcha ma ọ bụ cupcakes na mmanụ ihe oriri ma gbasaa mgwakota agwa maka cheesecakes . Achacha Cowberry, kpochapụrụ site na pedicels ma kpoo ya na ụlọ okpomọkụ, mgbe ahụ fesaa ya na sugar ma jiri nwayọọ tinye cheesecake. Kpochapu oven ruo 180 ogo ma tinye n'ime efere na-esi nri maka ihe dịka nkeji iri anọ.
Oge eruola ime ude mmiri, nke ị nwere ike ịgbakwunye okwu ahụ na mgwakota agwa. Gwakọta ya na shuga. Mgbe ihe nzacha ahụ dị njikere, gri ya na ngwakọta nke a, kpoo ya ma tinye ya n'ime friji.
Mgbe awa 3, cheesecakes na cranberries na utoojoo ude dị njikere. Oge na oven na-adabere na mmasị gị. Ọ bụrụ na ịchọrọ buns criss - hapụ ha n'ime maka nkeji 5.
N'otu ụzọ ahụ dị mfe, ị nwere ike ime achịcha na-eko achịcha dị ụtọ - ihe oriri dị ụtọ maka tii.
Ntụziaka maka kuki dị mkpirikpi na margarine
Salad mkpụrụ osisi na utoojoo ude
Achịkasị maka achicha - ntụziaka kachasị mma nke ule bisiki na-aga nke ọma
"Mkpụrụ" na mmiri ara ehi - nke a na-emepụta
Kedu esi esi akpọọ nkụ n'ụlọ?
Ude maka mastic
Achịcha "Ụda Ogbugbu" - nhazi uzommebe
Kuki obere kuki na-enweghị àkwá
Chiiz na obi cheese - 8 na-adọrọ mmasị ntụziaka maka ọ bụla uto!
Esi akpọọ nkụ mannik?
Nri bred chocolate
Dopegit n'oge ime - ntuziaka maka ojiji
Akpụkpọ anụ edo edo 2017 - ejiji ejiji, echiche ndị na-adọrọ mmasị, ihe ngwọta mbụ
Usoro igwe egwu mmiri
Karịa ịsacha anya na conjunctivitis?
Igwe egwu nke ndi nwanyi di ime - egwu nwere nnukwu anya
Tea site na mint - ọma na ihe ọjọọ
Kanna - kụrụ ma na-elekọta na-emeghe n'ala, iwu dị mfe nke ịkụ
Ụdị ntutu isi maka ntutu isi
Ejichaa aka gị
Chubushnik - kụrụ ma lekọta
Kylie Jenner maara banyere nsogbu nke nna-transgender
White brik na akwụkwọ ahụ aja
Janice Dickinson nwere ike ịgafe n'oche nkwagharị
Ememe na Japan
Ihe iri atọ na ịchọtara ezigbo enyi gị
Suspension Dirofen maka Puppies
Kedu ka esi ata di ya ahụhụ?
Marinade na nri soya maka ọkụkọ
Akpa azụ na mkpuchi
Okooko osisi nke karama plastic